अन्तिममा काम लाग्ने भनेको सरकारी अस्पताल नै रहेछ, पर्दा नहेर्ने निजी क्षेत्र के काम ? – Agrimpost
मुख्य पृष्ठयौन/स्वास्थ्यअन्तिममा काम लाग्ने भनेको सरकारी अस्पताल नै रहेछ, पर्दा नहेर्ने निजी क्षेत्र के काम ?
काठमाडौं: को;रोना भा’इरसको महामारीले प्रभावित नभएको क्षेत्र सायदै होलान् । विश्वलाई नै तर्साएको कोरोनाकै कारण अर्थतन्त्रलाई ठुलै संकट थपिदिएको छ। को;रोनाको प्रभावबाट नेपालको कुनै पनि क्षेत्र अछुतो छैन । यसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई धक्का दिएको छ । नेपाल यतिबेला लकडाउनको अवस्थामा छ । आर्थिक गतिविधि कुनै पनि भएको छैन ।
अर्थविद् केशव आचार्यले रातोपाटिसँगको अन्तर्वार्तामा भनेका छन्- ज्वरो आएको वि’रामी गए भने अहिले निजी अस्पतालले हेर्दै हेर्दैन । जति काम नलाग्ने भनेपनि त्यही वीर अस्पताल, टिचिङ, पाटन, अञ्चल अस्पताल जस्ता सरकारी अस्प तालनै चाहिँदो रहे छ । यसकारण यस्ता सरकारी संयन्त्रलाई, चुस्त, दुरुस्त पार्न सरकारी क्षेत्रमा लगानी बढाउनु जरुरी छ । जसले आपतकालिन अवस्थामा आधुनिक र सुविधा सहितको सेवा दिन सकोस्।
सबै सरकारी संयन्त्रलाई आफ्नो आफ्नो ठाउँमा जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । उनले भनेका छन् म बसेको चाबहिल वरपरको अस्पतालहरु ओम, हेल्पिङ हेण्ड, मेडिकेयरजस्ता थुप्रै छन् तर ती सबै करिब— करिब ताल्चा लागेको अवस्था छ । यसबाट पुष्टि हुन्छ, परेको बेला निजी क्षेत्रले नगर्दो रहेछ ।